(ICAO) oo Doowlada Soomalaiya ku wareejisay qalab duulista hawada loo isticmaalo
Home Somali News (ICAO) oo Doowlada Soomalaiya ku wareejisay qalab duulista hawada loo isticmaalo
Garoonka Diyaaradaha Muqdisho
Dowlada Federalka Soomaaliya iyo hay’ada caalamiga ah ee duulista hawada(ICAO)ayaa waxaa ka dhexeeya khilaafkii ugu sareeyay kadib markii si qalad ah magaalada Muqdisho loo keenay konteenaro ay ku jiraan qalab lagu maamulo duulista hawada Soomaaliya balse oo waday magaalada Nairobi.
Hase yeeshee hay’ada ICAO ayaa dooneysa qalabkan in la geeyo magaalada Nairobi si halkaa loogu isticmaalo isla markaana lagula socdo dhaqdhaqaaqa hawada Soomaaliya. Hase yeeshee dowlada Federalka ayaa diiday in qalabkaas ay wareejiso,iyadoo sheegtay dowlada in qalabkan uu yahay mid ay dowlada Soomaaliya leedahay.
Qalabkan oo la sheegay in ay ku filan tahay in dib loogaga bilaabo magaalada Muqdisho la socodka diyaaradaha maraya hawada dalka Soomaaliya ayaa lagu qiimeeyay malaayiin Dollar.
Dhowaan ayaa Madaxweyne Farmaajo waxa uu u magacaabay Maareeye cusub hay’ada duulista hawada iyadoo la sheegay in Maareeyaha cusub Yuusuf Jaalle uu dardar culus geliyay howlaha hay’ada duulista hawada.
Tan iyo burburkii dowladii hore ee Soomaaliya waxaa hawada Soomaaliya laga maamulayay magaalada Nairobi iyadoo lacago adag laga soo xareeyo canshuurta laga qaado diyaaradaha dul mara hawada Soomaaliya.
Mohamed - May 17, 2018
Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle) ayaa sheegay...